Izabelo zesitokhwe saseYurophu | Ezezimali
Izitokhwe zesitokhwe eYurophu
Ukuba injongo yabatyali mali kukukhetha iimarike zokulingana zaseYurophu, akukho mathandabuzo ukuba ezinye iindlela zinkulu. Ukukhetha phakathi kwezalathiso zamazwe abaluleke kakhulu kwilizwekazi elidala, kubandakanya nemarike yaseSpain emelwe yi-Ibex 35. Kule meko ngokubanzi, kuya kuhlala kuphela ukufumanisa ukuba leliphi elona lifanelekileyo ngaphakathi komdla wakho ngokubanzi . Nangona zihlala zinefayile ye- indaleko efanayo kakhulu phakathi kwazo zonke kuba zivela kwindawo enye yezoqoqosho efana naleyo yenza indawo ye-euro.
Ezi zalathiso zesitokhwe zaseYurophu yenye indlela yotyalo-mali ngaphandle kokushiya imida yelizwekazi elidala. Ngenzuzo yokuba enye okanye enye imodeli yotyalo-mali inokukhethwa njengoko kunokubakho ukwahluka kufutshane nepesenti enye. Eyona njongo iphambili ye Yandisa imida yenzuzo ezinokubonelela ngeemarike zezemali kwilizwe lethu. Ngaphandle kokunyusa iikhomishini eziveliswa kwezi marike zezemali. Ngeeyure ezifanayo nakwiimarike zezemali zikazwelonke.
Kwelinye icala, ungathatha ithuba lesicwangciso esiliqalo njengokukhetha ii-indices ezinolona hlobo lobuchwephesha ngexesha elithile lonyaka. Njengokuthenga izitokhwe ezingekhoyo kwiimarike zasekhaya. Ukongeza, kuyinyani ukuba iikhomishini zeemarike zezemali azinyanzelisi kwaye nakweyiphi na imeko zingaphantsi kwezo zigunyazisiweyo Amashishini aseMelika Yeyiphi eyona nto inzima kule mizuzu ingqalileyo. Ukuya kwinqanaba lokuba inokusekwa njengenye indlela yotyalo-mali ngoku.
1 IFransi: i-CAC 40
2 UDax waseJamani
3 ILondon FTSE 100
4 I-FTSE MIB e-Itali
5 I-Eurostoxx 50
IFransi: i-CAC 40
I-CAC 40 ithatha igama layo kwikota yayo yantlandlolo (Cotation Assistée en Qhubeka), edibanisa amaxabiso angama-40 abalulekileyo phakathi kwe- Iinkampani ezili-100 ezinkulu zithengise kwiStock Stock Exchange. Inxalenye elungileyo yeempahla zayo zenziwe ziinkampani zaseFrance. Nangona le index yesitokhwe ibonakaliswa yinto, kungenxa yokuba uninzi lwezi nkampani zinomdla ngaphandle kweFrance. Into eshenxa kude kwiindlela zeenkampani ezikhoyo kwi-Ibex 35.
Kwelinye icala, iiseshoni zenzeka ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu, njengoko kunjalo nakwezinye ii-indices zaseYurophu. Ngeeseshoni zokurhweba eziphela kwifandesi yokuvala okufutshane kakhulu. Ngamanye amaxabiso afanelekileyo kule ndawo, kubandakanya namacandelo iaeronautical, ezezimali okanye ezomnxeba wonxibelelwano. Ngeekhomishini zokuthengwa kwezabelo kunye nemisebenzi yokuthengisa efanayo kakhulu neyethu. Njengenye yeendlela ezizezinye kwisalathiso esikhethiweyo sokulingana kweSpain.
I-DAX 30 okanye iXetra sisalathiso sokulingana kweblue chip Iinkampani ezingama-30 ezinkulu eJamani Kwaye zidweliswe kwiimarike zezabelo zeFrankfurt. Iiseshoni zenziwa phantsi kwenkqubo yefandesi yokuvala amaxabiso kunye neeyure ezifanayo nakwiimarike zesitokhwe zaseSpain. Ngelixa ngokuchaseneyo, yenye yee-indices ezinefuthe elikhulu kwezinye iimarike zezemali zaseYurophu, ngakumbi ezo zaseSpain. Zombini ngengqondo enye okanye enye, kuba amandla esi salathisi sesitokhwe sikhulu kunesinye. Njengomthombo wesalathiso kuninzi lwabatyali mali abancinci nabaphakathi abakuthathela ingqalelo, bobabini ukuvula nokuvala izikhundla kwimarike yemasheya.
ILondon FTSE 100
Isalathiso sesitokhwe seLondon Stock Exchange kwaye sesinye sezona zibalulekileyo emhlabeni. Kwelinye icala, yenziwe ziinkampani ezili-100 ze Iimali ezinkulu zentengiso yase-UK. Kwimali enkulu kwaye oko kuyabonakala kuba kwiimeko ezininzi ziyaziwa ngabatyali mali abancinci nabaphakathi. Isalathiso sesitokhwe esaziwa njenge «iinyawo> leyo, ngapha koko, sisishunqulelo se-Financial Times Stock Exchange 100.
Ngenxa yoko Brexit, lo mthombo wesalathiso sezabelo zamashishini aseYurophu simahla kwaye ngale ndlela inokuba yenye indlela yokujongana notyalo mali kwezi nyanga zimbalwa zizayo. Akumangalisi ukuba, inganyanzelekanga ukuba iphindaphinde ii-indices eziphambili zelizwekazi elidala kwaye ke inokumela amathuba amatsha eshishini kubatyali mali abanesimo esinoburharha ngakumbi. Nangona ingekho ngaphezulu okanye ngaphantsi kunenzuzo, kodwa ngokuchaseneyo, kuxhomekeke kwimeko yangoku efanayo.
I-FTSE MIB e-Itali
Ayisiyo isalathiso esincinci, njengoko abanye abatyali mali banokucinga, kodwa inokuba yenye indlela yotyalo-mali kwaye ifane kakhulu neyethu. Yeyona ndawo iphambili yokutshintshiselana ngesitokhwe e-Italy. Apho kudweliswe izinto ezingama-40 ezineemali ezinkulu kwimakethi yentengiso ngokubanzi, equlathe ezinye Iinkampani ezingama-350 ezithengiswa esidlangalaleni. Kuzo zonke ii-indices, le yenye yezona zinto zixabisekileyo kwixabiso lezabelo zalo. Ngamanye amagama, unokufumana imali eninzi ngokusebenza, kodwa ngenxa yesizathu esinye, ungashiya i-euro eninzi endleleni ngenxa yolu phawu lukhethekileyo kwii-equities zase-Italiya.
Ukuqukumbela, asinakulibala umlinganiso wazo zonke ii-equities zaseYurophu. Kule meko, sisalathiso sesitokhwe esibalulekileyo esenziwe ziinkampani ezingama-50 ezineemali ezinkulu kwiimarike zesitokhwe zelizwekazi lakudala. Kananjalo asinakho kuthi ukuba kulo mthombo wesalathiso ezinye ze Iitshiphusi eziluhlaza zamashishini zaseSpain. Umzekelo, iBanco Santander, i-BBVA, iTelefonica okanye i-Iberdrola phakathi kwezinye zeenkampani ezichaphazelekayo ezikwimakethi. Kuyinto, njengoko besitsho, cream cream isivuno kule ndawo. Ngendlela efana kakhulu nezinye iimarike zesitokhwe. Umahluko kakhulu kubume bayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Izitokhwe zesitokhwe eYurophu
Imbonakalo yengeniso esisigxina kulo nyaka
Iibhondi zokuthanda izwe: enye indlela yotyalo-mali